ဂျင်မီဝေးလ်စ်: ဝစ်ကီပီးဒီးယား မွေးဖွားလာခြင်း | TED Talk Subtitles and Transcript | TED
1,199,492 views • 20:01
စံပြစွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုဟာ တော်လှန်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ် လုံလုံခြုံခြံု နေချင်တာမျိုးကို ရပ်ပစ်ရမယ်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ Britannica စွယ်စုံကျမ်းရဲ့ အကြီးတန်း စာတည်းဖြစ်လာတဲ့ Charles Van Doren က ၁၉၆၂ မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Britannica ရဲ့ ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်း သမိုင်းတစ်လျှောက်ကို သိကြရင်တော့ တော်လှန်ပြောင်းလဲရဲတဲ့သဘော လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး လုံးဝကို လုံခြံုစိတ်ချရတဲ့ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလှတဲ့ စွယ်စုံကျမ်းအမျိုးအစား တစ်ခုအဖြစ်သာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ “၀ီကီပီးဒီးယား” က တကယ့်ကို တော်လှန်ပြောင်းလဲတဲ့ အယူအဆနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူသားတို့ရဲ့ ဗဟုသုတ အစုအပေါင်းကြီးကိုု ကမ္ဘာပေါ်က လူတစ်ဦးစီတိုင်းကနေ အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်နိုင်ဖို့ပါ
ကျွန်တော်တို့ အခုလုပ်နေတာ အဲဒါပါပဲ။ ဒီတော့ ၀ီကီပီးဒီးယား ဆိုတာ ခုနက သရုပ်ဖော်ပြကွက်လေးကို ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ရပါပြီ၊ ၀ီကီပီးဒီးယား ဆိုတာ “free license” (အကန့် အသတ်မဲ့ သုံးလို့ရတဲ့) စနစ်သုံး စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက စေတနာ့ဝန်ထမ်း ထောင်ပေါင်းများစွာက ဘာသာစကားပေါင်း များစွာနဲ့ ရေးသားကြပါတယ်၊ ခုနက သရုပ်ပြသွားတဲ့ ဆော့ဝဲ အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ၀ီကီ ဆော့ဝဲကို သုံးပြီးရေးတာပါ — ဒီတော့ မည်သူမဆို မြန်မြန်ဆန်ဆန် တည်းဖြတ်ပြီး သိမ်းဆည်း ( Save ) လိုက်လို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ချက်ချင်းလွှင့်တင်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ၀ီကီပီးဒီးယားနဲ့ သက်ဆိုင်သမျှကို စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေ အားလုံးနီးပါးဟာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေပါ ဒီတော့ Yochai ( ဟားဗတ်ဥပဒေပါမေက္ခ) က အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စနစ်သစ်တွေ အကြောင်းပြောတော့ သေချာပေါက် ၀ီကီပီးဒီးယားကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေတာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ ၀ီကီပီးဒီးယား ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ တကယ်တမ်း ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို နည်းနည်း ထပ်ပြီးပြောပါ့မယ်။
၀ီကီပီးဒီးယား ကို ကျွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အကျိုးအမြတ်မယူ အဖွဲ့အစည်း ၀ီကီပီးဒီးယား ဖောင်ဒေးရှင်းက ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးတည်ချက် ၀ီကီပီးဒီးယား ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ပင်မရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာပေါ်ကလူတိုင်းကို အခမဲ့ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခု ပေးနိုင်ဖို့ပါ။ ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ ခင်ဗျားတို့တွေးမိရင်တော့ ဒါဟာ အလန်းစား ဝက်ဆိုက်တစ်ခု တည်ဆောက်တာထက် အများကြီးပိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ဒီဂျစ်တယ် ပိုင်းခြားမှု ( နည်းပညာကွာဟ၍ စီးပွားရေးပါ မညီမျှမှု)၊ ကမ္ဘာ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ လူတိုင်းကို သူတို့လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရရှိစေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေ ချမှတ်နိုင်အောင် မြှင့်တင်အင်အားပေးရာမှာ စိတ်ဝင်တစားရှိကြပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အင်တာနက်ဆိုတာထက်ကို ကျော်လွန်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးလုပ်ရမှာပါ ဒါကလည်း “free license” စနစ်ကို ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းပါ ဒီစနစ်က ဒေသခံ စွန့်ဦးတီထွင်ရေးသမားတွေ ဒါမှမဟုတ် ဆန္ဒရှိသူ မည်သူမဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုယူပြီး အလိုရှိရာ လုပ်နိုင်ပါအောင် မြှင့်တင်ကူညီပေးနိုင်လို့ပါ ကူးယူနိုင်ပါတယ် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ် စီးပွားရေးအရဖြစ်စေ စီးပွားရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲဖြစ်စေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ၀ီကီပီးဒီးယားကို အကြောင်းပြုပြီး အခွင့်အရေးတွေအများကြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ် ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူတွေရဲ့လှူဒါန်းမှုနဲ့ ရပ်တည်နေတာပါ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ၀ီကီပီးဒီးယား လည်ပတ်ဖို့အတွက် တကယ်တမ်း လိုအပ်တဲ့ငွေကြေး ဘယ်လောက်တောင် နည်းတယ်ဆိုတာပါပဲ Yochai က ပုံနှိပ်စက်တစ်ခု ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဂရပ်ဖ်ဇယားကို ပြသသွားပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ ၀ီကီပီးဒီးယားရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပြောပြသွားပါ့မယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်ဆုံး ၀ီကီပီးဒီးယား ရဲ့အရွယ်အစား ဘယ်လောက် ကြီးတယ်ဆိုတာကို ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်း ၆သိန်း ရှိပါတယ် ဘာသာစကားပေါင်း များစွာနဲ့ ဆောင်းပါးပေါင်း နှစ်သန်း ရှိနေပါပြီ အကြီးဆုံး ဘာသာစကားတွေကတော့ ဂျာမန်၊ ဂျပန်နဲ့ ပြင်သစ်တို့ဖြစ်ပြီး အနောက်ဥရောပ ဘာသာစကား အားလုံးက တော်တော်လေး အရွယ်အစားကြီးပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဆိုက်ဆီကိုလာတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ ဝန်းကျင်လောက်ကသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၀ီကီပီးဒီးယားဆီမှာ ဆုံတွေ့ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက အံ့အားသင့်ကြပါတယ်။ လူအများအပြားက အင်တာနက်သုံးရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အလွန်ဗဟိုပြုပြီးတွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တကယ့်ကို ဂလိုဘယ်ဆန်ပါတယ်။ ဘာသာစကားတွေ အများကြီးနဲ့တွေးပြီး ရှာဖွေကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို ့ဘယ်လောက်တောင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေပြီလဲ — ကျွန်တော်တို့ ထိပ်တန်းဝက်ဆိုက် ၅၀ စာရင်းမှာပါပါတယ် နယူးယောက်တိုင်းစ် သတင်းစာထက်တောင် ပိုပြီး ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ Yochai ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဆီ ရောက်တာပါပဲ။
ဒီပုံက ၀ီကီပီးဒီးယားရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ပြတာပါ ကျွန်တော်တို့ကဟိုနားက အပြာလိုင်းပါ။ နယူးယောက်တိုင်းစ် ကတော့ ဟိုးဘက်နားကပါ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက နယူးယောက်တိုင်းစ် ဝက်ဆိုက်ဆိုတာ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားပြီး အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ဘယ်နှစ်ရာရှိမှန်းတောင် ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာတော့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသာရှိပါတယ်။ အဲဒီဝန်ထမ်းကတော့ ခေါင်းဆောင် ဆော့ဝဲ ရေးဆွဲသူ ပါ သူကလည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဝန်ထမ်းဖြစ်လာတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အများဆုံး ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေက အဲဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကပါ။ လူမျိုးစုံ ရောပြွမ်းနေတဲ့ စေတနာဝန်ထမ်း အဖွဲ့ကနေ စီမံခန့်ခွဲပါတယ်။ တည်းဖြတ်မှုအားလုံးကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေက လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နည်းလမ်းက ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားနိုင်သမျှ သမရိုးကျ အဖွဲ့အစည်းပုံစံတွေနဲ့ လုံးဝကိုမတူပါဘူး။ လူတွေက အမြဲတမ်းမေးကြပါတယ် “ ဒီတော့ ဘယ်သူက ဒါကိုကြီးကြပ်လဲ” တဲ့။ ဒါမှမဟုတ် “ဒါကိုဘယ်သူလုပ်တာလဲ” နဲ့ပေါ့။ အဖြေကတော့ ဝင်ပါချင်သူ မည်သူမဆိုပါပဲ။ အင်မတန်မှ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘဲ ပရမ်းပတာကိစ္စပါ။ ကျွန်တော်တို့အခု နေရာသုံးနေရာမှာ ဆာဗာပေါင်း ကိုးဆယ်ကျော် ရှိနေပါပြီ အဲဒါတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်က စေတနာ့ဝန်ထမ်း နည်းစနစ်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တွေက ကွပ်ကဲပါတယ်။ နေ့ည အချိန်မရွေး ကျွန်တော် အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီး ဆာဗာတွေနဲ့ ပတ်သက်သမျှ မေးခွန်းမေးဖို့စောင့်နေတဲ့သူ ရှစ်ဦးကနေ ဆယ်ဦးအထိ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီအပြည့် အသင့်ရှိနေတဲ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ရပြီး ၀ီကီပီးဒီးယားမှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေသလိုမျိုး လုပ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုမှုပေါင်း တစ်လလျှင် ၁.၄ ဘီလျံ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ တော်တော့ကိုကြီးတဲ့အရာပါပဲ ပြီးတော့ စေတနာဝန်ထမ်းတွေက အကုန်စီမံဆောင်ရွက်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bandwidth အတွက် လစဉ်ကုန်ကျငွေဟာ ဒေါ်လာငါးထောင်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကကုန်ကျငွေပါ။ အမှန်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မှ မငှားပဲ လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ Brion (ဘရိုင်ယန်) ကိုငှားလိုက်တာက သူက ဝီကီပီဒီးယားမှာ အချိန်ပိုင်း နှစ်နစ် လုပ်ခဲ့ကာ အချိန်ပြည့် လုပ်နေလို့ပါ။ သူကို ကျွန်တော်တို့ ငှားလိုက်တာက စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ လုပ်နိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်နိုင်အောင်လို့ပါ ဒီတော့ အရေးပါတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ဒီလိုပရမ်းပတာနိုင်လှတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ လုပ်သမျှအားလုံး အမှိုက်တွေချည်း မဟုတ်ရတာလဲ ဒီဝက်ဆိုက်က ဘာလို့ အဲ့လောက် ကောင်းနေရတာလဲဆိုတာပါ။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ် ပြည့်စုံတယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့မျှော်မှန်းထားတာထက်ကို အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့့ရဲ့ လုံးဝ ပရမ်းပတာမော်ဒယ်ကို ထည့်စဉ်းစား ပြောရရင်ပေါ့နော်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်အကြောင်း ဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာ အူကြောင်ကြောင် တည်းဖြတ်ချက် လုပ်တာကို ခင်ဗျားတွေ့ရင် အော် ဒီစာမျက်နှာကတော့ အမှိုက်ဖြစ်သွားမှာပဲလို့ ခင်ဗျားတို့က ထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုတြွေ မင်ပြီးရင်တော့ — အဲလို စစ်ဆေးမှုတွေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါမျိုးတွေကိုပိုပြီး များများလုပ်ဖို့အားပေးပါတယ် ၀ီကီပီးဒီးယားကို သမရိုးကျ စွယ်စုံကျမ်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရပါတယ်။
ဂျာမန်မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ၀ီကီပီးဒီးယားထက် အလွန့်အလွန်ပိုသေးတဲ့ ဂျာမန်ဘာသာ ၀ီကီပီးဒီးယားကို Microsoft Encarta စွယ်စုံကျမ်းနဲ့ Brockhaus Multimedia တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ရာမှာ အကုန်လုံးကို ကျွန်တော်တို့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် သူတို့က ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ဆောင်းပါးတွေ လာရောက်ကြည့်ရှုခိုင်းပြီး အရည်အသွေးကို နှိုင်းယှဉ်စေပါတယ် အဲဒီ့ရလဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် ကျေနပ်စရာပါ။ လူတွေအများကြီးလည်း Bush-Kerry အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စ အကြောင်း ကြားဖူးကြပါတယ် မီဒီယာကလည်း အဲဒီကိစ္စကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြကြပါတယ်။ Red Herring ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကနေ စတင်ခဲ့တာပါ။ သတင်းထောက်တွေက ကျွန်တော်ကို ဖုန်းဆက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက သူတို့ ကျွန်တော့ နာမည်တော့ မှန်အောင်ပေါင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျ ဒီ Bush-Kerry ကိစ္စ အင်မတန် အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စပါ။ ၀ီကီပီးဒီးယား အသိုက်အဝန်းဟာ ဒီကိစ္စကြောင့် တစ်စစီပြိုကွဲနေပြီ လို့ သူတို့ကဆိုချင်တာပါ။ ဒီတော့ “ ဒါတွေဟာ ၀ီကီပီးဒီးယား သမိုင်း တစ်လျှောက်မှာ အငြင်းပွားဖွယ် အကောင်းဆုံးပါ” လို့ ကျွန်တော်ကပြောတယ် ဆိုပြီးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်က ဒါတွေဟာ လုံးဝအငြင်းပွားစရာ မရှိဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ ကိုးကားဖော်ပြချက်က သိပ်မကွာပါဘူးနော် ( ရယ်သံများ) ဆောင်းပါးတွေကို အများကြီးတည်းဖြတ်ထားပါတယ်။ ကိစ္စအနည်းငယ်မှာ ဆောင်းပါးတွေကို ပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်၊ တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက မကြာသေးမီကပဲ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ "တစ်ခါတစ်လေ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ အရေးယူမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ရဲ့ အများစုမှာ Wales က Bush-Kerry ဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်” တဲ့ ဒီရေးသားချက်က ကျွန်တော်တို့တွေ အနေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဟိုနားဒီနားမှာ ပိတ်ပစ်ရတာတွေရှိပါတယ်လို့ ကျွန်တော်က သတင်းသမားကို ပြောလိုက်ပြီးနောက်မှ ပါလာတာပါ။ ဒီတော့ ယေဘုယျအမှန်တရားက ၀ီကီပီးဒီးယား အသိုက်အဝန်းမှာ အငြင်းပွားစရာတွေရှိမယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်တဲ့၊ ကိစ္စမျိုးဟာ တကယ်တမ်း အငြင်းပွားမှု လုံးဝမရှိပါဘူး။
အငြင်းပွားဖွယ် အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေကို တည်းဖြတ်မှုတွေ အရမ်းများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အသိုက်အဝန်းမှာ အငြင်းပွားစရာ များများစားစား မဖြစ်လာစေပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ လူအများစုက ဘက်မလိုက်မှုရဲ့ အရေးပါလိုအပ်ချက်ကို နားလည်လို့ပါ။ တကယ့်တိုက်ပွဲက လက်ယာဝါဒီနဲ့ လက်ဝဲဝါဒီတွေကြားထဲမှာ ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက လူအများစု ယူဆကြတာပါ။ တကယ်က အတွေးအခေါ်ရှိသူအဖွဲ့နဲ့ ကြောင်တောင်တောင် လူတွေအဖွဲ့ကြားက တိုက်ပွဲပါ။ နိုင်ငံရေးဂိုဏ်း အစဉ်အတန်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းကမှ ဒီနှစ်ဖွဲ့အပေါ် လက်ဝါးကြီးအုပ် ခြယ်လှယ်နေခြင်း မရှိပါဘူး။ Bush-Kerry ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ့်အမှန်တရားက Bush-Kerry ဆောင်းပါးတွေကို ပိတ်ပစ်တာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကာလရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်း အောက်တောင်နည်းပါတယ်။ အငြင်းပွားစရာရှိတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် လက်သရမ်းဖျက်ဆီးမှုပါ။ ဇာတ်ခုံပေါ်မှာတောင် တစ်ခါတစ်လေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သတင်းသမားတွေက ကျွန်တော့ကို သတင်းပို့ကြတယ်။ သူတို့ဝီကီပီးဒီးယားကို တမင်ကို ဖျက်လို့ဖျက်ဆီး လုပ်တဲ့အခါမှာ ပြန်ပြင်တာ မြန်လွန်းလို့သူတို့ အံ့အားသင့်ရပါသတဲ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ပြောနေကျပါပဲ။ ဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ မကောင်းပါဘူးလို့ပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲ။ ဒီအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနေသလဲ။ ဒါက ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲပေါ့။
အခြေခံအားဖြင့် လိုအပ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ နည်းနည်းလေးပါပဲ။ အများစုကတော့ လူမှုရေးရာမူဝါဒတွေနဲ့ ဆော့ဝဲ ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ။ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အရေးပါဆုံးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘက်မလိုက ်အမြင်မူဝါဒပါပဲ။ ဒါဟာ ဒီအသိုက်အဝန်းရဲ့ လုံးဝအငြင်းပွားရန်မရှိတဲ့ ပင်မ ဥပဒေသအနေနဲ့ အစဦးပိုင်းကတည်းက ကျွန်တော် သတ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီအချက်ဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ လူမှုရေးအခြေခံ သဘောတရားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ အမှန်တရားနဲ့ ဓမ္မဓိဌာန်ကျမှု တို့အကြောင်း သိပ်မပြောပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ တကယ်လို့သာ ကျွန်တော်တို့က ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှန်တယ်ဆိုတဲ့ အရာတွေချည်း ရေးမယ်ဆိုပြီး ဘာဟာတွေတော့ ရေးရမယ်လို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နေရရင် ဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခင်ဗျား မှန်တယ်ထင်တာကို ကျွန်တော်က လက်မခံနိုင်တာမျိုးလည်း ရှိလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၀ီကီပီးဒီးယား အသိုက်အဝန်းမှာ ရာဇဝင်ရှိတဲ့့ ကျွန်တော်တို့ချင်းသုံးတဲ့ “ဘက်မလိုက်မှု” ဆိုတဲ့ စကားရပ် တစ်ခုရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဆိုလိုတာက အငြင်းပွားဖွယ် အကြောင်းအရာ တစ်ရပ် ပေါ်လာတိုင်း ၀ီကီပီးဒီးယား ကိုယ်တိုင်က အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်ဖက်မှာမှ မရပ်ဖို့ပါ။ ယုံကြည်ရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေပြောတယ် ဆိုတာကိုသာ မှတ်တမ်းပြုတင်ပြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီဘက်မလိုက်မူဝါဒက ကျွန်တော်တို့အတွက် တကယ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းက အင်မတန်မှ မတူကွဲပြားကြတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုက အတူတကွ စုပေါင်းပြီး တကယ်အလုပ်ဖြစ်စေဖို့ အင်အားပေးမြှင့်တင်ပေးနိုင်လို့ပါ။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု နောက်ခံတွေ လွန်စွာကွဲပြားတဲ့ ပါဝင်ရေးသားတွေရရှိထားတာပါ။ အစကတည်းက ညှိနှိုင်းဖြေလျော့ပေးမှု လုံးဝမရှိတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဘက်မလိုက်မူဝါဒကို ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် လူတွေ အတူတကွ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ သေချာစေပြီး စွယ်စုံကျမ်းထဲက တည်းပုဒ်တွေ ခေါင်းစီးတွေဟာ တွေဟာ လက်ဝဲဝါဒီနဲ့ လက်ယာဝါဒီတို့ကြားက အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲ မဖြစ်လာစေတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒီလိုအပြုအမူများ လုပ်ခဲ့ရင် ဒီအသိုက်အဝန်းကနေ ထွက်သွားဖို ့တောင်းဆိုခံရမှာပါပဲ။ နောက်တော့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ အကဲဖြတ်မှု (real-time peer review) ဝက်ဆိုက်ပေါ်က တည်းဖြတ်လိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲမှန်သမျှဟာ “ လတ်တလော ပြင်ဆင်ချက်မျာ းစာမျက်နှာ” ဆီကို ရောက်သွားပါမယ် အဲဒီတော့ တစ်ယောက်က ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ “ လတ်တလော ပြင်ဆင်ချက်များ စာမျက်နှာ” ဆီကို ချက်ချင်းရောက်သွားပါတယ်။ အဲဒီ “ လတ်တလော ပြင်ဆင်ချက်များ စာမျက်နှာ” ကလည်း IRC ချန်နယ်ထဲက ိုပို့လိုက်ပါတယ် IRC ဆိုတာ လူတွေက ဆော့ဝဲ တန်ဆာပလာ အမျိုးမျိုးကို သုံးပြီးစောင့်ကြပ်နေတဲ့ အင်တာနက် စကားဝိုင်း ချန်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူတွေက RSS feed တွေရနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေ အကြောင်းကို အီးမေးလ်ကနေ တစ်ဆင့် အကြောင်းကြားစာတွေ ရနိုင်ပါတယ် ပြီးတော့ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် စောင့်ကြည့် စာရင်းတွေလည်း ချမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်အကြောင်း စာမျက်နှာဆိုရင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း အနည်းငယ်ရဲ့ စောင့်ကြည့် စာရင်းမှာပါပါတယ်။ မကြာခဏ ရန်လိုဖျက်ဆီး (vandalize) ခံရလို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဖြစ်နေတာက တစ်ယောက်ယောက်က အပြောင်းအလဲကို အလွန်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သတိပြုပြီး ပြင်ထားကို မူလအတိုင်း ရိုးရိုးလေးပြန်ပြင်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဥပမာပြရရင် စာမျက်နှာသစ်များဆိုင်ရာ သတင်းပေးပို့ချက ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ၀ီကီပီးဒီးယားရဲ့ တစ်ခုသော စာမျက်နှာဆီကို သွားလို့ရပါတယ်။ စာမျက်နှာသစ်တစ်ခု ဖန်တီးလိုက်တိုင်း အဲဒီစာမျက်နှာကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီဟာက တကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသစ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စာမျက်နှာအများအပြားက ASDFASDF ဆိုတာမျိုး ဖျက်ပစ်ရမယ့် အမှိုက်တွေချည်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း ၀ီကီပီးဒီးယားမှာ တချို့သော ဆောင်းပါးသစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စအများစုထဲက တချို့ပါ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေက ဆောင်းပါးတစ်ခု စတင်လိုက်ပါမယ်။ အခြားလူတွေက စိတ်ဝင်စားသွားပြီး သူတို့လည်းပါဝင်လာပြီး၊ အဲဒီဆောင်းပါးကို ပိုကောင်းလာအောင ်ကူညီပြီးလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ၀ီကီပီးဒီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ် အကောင်းဆုံးနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံး အချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမည်မသိ အသုံးပြုသူတွေက တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်မှုတွေ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Chris က ဝက်ဆိုက်ထဲ Log In ဝင်တာမျိုးတွေ ဘာတွေ၊ ဘာမှကိုမလုပ်ရပဲ သူပြင်ဆင်လို့ ရလိုက်ပါတယ်။ ဝက်ဆိုက်ပေါ်ကို ဒီတိုင်းသွားပြီး ပြင်လိုက်ရုံပါပဲ သို့တိုင်အောင် တကယ်တမ်း ဝက်ဆိုက်မှာ ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုရဲ့ ၁၈ % ကသာ အမည်မသိ အသုံးပြုသူတွေက လုပ်တာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ ဝက်ဆိုက်ပေါ်က ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မှုတွေ အများစုက အဆက်အသွယ် အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ လူပေါင်း ၆၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ အထိရှိနိုင်တဲ့ ကျစ်လျစ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသိုက်အဝန်းဆီကနေ လာတာပါ။ ကျွန်တော်တို့မှာ IRC ချန်နယ်ပေါင်း ၄၀ ၊ စာပို့စာရင်းပေါင်း ၄၀ ရှိပါတယ် ဒီလူတွေအားလုံးက အချင်းချင်းသိကြပါတယ်၊ ဆက်သွယ်ကြပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာ အွန်လိုင်းပြင်ပ အစည်းအဝေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီလူတွေက ဝက်ဆိုက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ကြီးကြီးမားမားကို လုပ်နေတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့တွေက တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေ းပြည့်ဝသူတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ ပြဌာန်းထားတဲ့ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်အရည်အသွေးန ဲ့ညီမျှ ဒါမှမဟုတ် ပိုမြင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေကို အမြဲတမ်း မပြည့်မီပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေတာ ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေပြည့်မီဖို့ပါပဲ
ဒီတော့ အဲဒီကျစ်လျစ်တဲ့ အသိုက်အဝန်းဆိုတာ ဒီဝက်ဆိုက်ကို အမှန်တကယ် အလေးထားတဲ့သူတွေပါ။ ဒီလူတွေဟာ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးသမျှ စမတ်ကျဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲက တချို့ပါ။ သေချာပေါက် ကျွန်တော် တာဝန်မို့ပြောရတယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ်ကို မှန်တာပါခင်ဗျ။ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုေရးရတာကို ပျော်ပြီး စွဲနေတဲ့ လူစားမျိုးတွေက တော်တော်လေး သားနားတဲ့ သူတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ခင်ဗျ ( ရယ်သံများ )
တန်ဆာပလာတွေ နဲ့ ဆော့ဝဲ: ကိုယ်လုပ်တာကို ကိုယ်ပြန်စောင့်ကြပ််ဖို့နဲ့ အလုပ်တွေ အားလုံးကို စောင့်ကြပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ကို (ကျွန်တော်တို့ အသိုက်အဝန်းကို ဆိုလိုတာပါ) ခွင့်ပြုပေးတဲ့ ကိရိယာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ဒါကတော့ "ပြားချပ်သော ကမ္ဘာ" ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းပါ ပြီးတော့ လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေကို ခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစာမျက်နှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်းတာက ဒါကို ခင်ဗျားက ချက်ချင်း တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ပြီး “အိုကေ၊ ငါနားလည်သွားပြီ” ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က သူရဲ့စာမျက်နှာဆီသွားပြီ းကြည့်လိုက်လို့ အမည်မသိ IP အမှတ်စဉ်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးဦးက ပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရင် “ဒါသံသယဖြစ်စရာပဲ။ ဒီလူဘယ်သူပါလိမ့်” ဆိုပြီး ဒီပြင်ဆင်မှု သမိုင်းမှတ်တမ်းကို လာကြည့်လိုက်ရင်တော့ အနီရောင်နဲ့ မှတ်သားထားတဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေကို ချက်ချင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ “အိုကေ။ကောင်းပြီလေ။ ဒီစာလုံးတွေကပြောင်းသွားတယ်။ ဒီလိုဒီလို” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါကတော့ စာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းကို ခပ်မြန်မြန် စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ ကိရိယာ တန်ဆာပလာတစ်ခုပါ။
ဒီအသိုက်အဝန်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ဘယ်အရာကိုမဆို အသေ မသတ်မှတ်ထားတာပါ။ လူမှုရေးရာ စည်းမျဉ်းတွေ အလုပ်လုပ်ပုံ စနစ်တွေကို ဒီဆော့ဝဲ ထဲမှာ လုံးဝပြင်လို့ ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးက ဝီကီစာမျက်နှာတွေမှာ ရှိနေရုံပါပဲ။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာအောင် ကွပ်ကဲနေတာမျိုး တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော ်သာဓကပြစရာကတော့ “ပယ်ဖျက်ရန် ဆန္ဒမဲ ပေးတဲ့ စာမျက်နှာ” ပါ ဒီတော့ ကျွန်တော်အစောပိုင်းက တင်ပြခဲ့သလိုပဲ လူတွေက ASDFASDF ဆိုပြီး လာရိုက်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကို ပယ်ဖျက်ပစ်ရပါတယ် ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကတော့ နည်းစနစ်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ပယ်ဖျက်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချေအတင်ဖြစ်စရာ ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဗျ ဒီအကြောင်းအရာဟာ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုမှာ ထည့်ရလောက်အောင် ထင်ရှားသလားဆိုတာ အဖြေရှာရတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေလည်း ရှိတာကိုလည်း ခင်ဗျားတို့ မှန်းဆကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေက မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရဲ့လား၊ အလိမ်အညာလား၊ မှန်ကန်ရဲ့လား၊ ဘာများပါလိမ့် ဆိုတာမျိုးတွေပါ။ ဒီတော့ ဒါအတွက် အဖြေကို ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ လူမှုရေးရာ နည်းစနစ်တစ်ခု လိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသိုက်အဝန်းထဲမှာ အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နည်းစနစ်တစ်ခုကတော့ “ပယ်ဖျက်ရန် ဆန္ဒမဲ ပေးတဲ့ စာမျက်နှာ” ပါပဲ။ အသေးစိတ် သာဓကတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီမှာ"Twisted Issues" ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် အကြောင်း စာမျက်နှာပါ။ ပထမဆုံးလူက ပြောပါတယ်၊ “ရုပ်ရှင်လို့တော့ ယူဆရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ Google စမ်းသပ်မှုမှာတော့ မအောင်မြင်ရှာဘူး။” တဲ့။ Google စမ်းသပ်မှုဆိုတာကတော့ တစ်ခုခုကို Google မှာရှိမလားလို့ ရှာကြည့်လိုက်တာကို ပြောတာပါ။ အကြောင်းကတော့ Google မှာတောင် မရှိဘူးဆိုရင် လုံးဝမရှိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ခြွင်းချက်မဲ့ စည်းမျဉ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ ဒါပေမဲ ့ခပ်မြန််မြန် ရှာကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ လမ်းစပါ ဒီတော့ တစ်ယောက်ယောက်က"ကျေးဇူးပြုပြီး ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါကမထင်ရှားလို့ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ” လို့ပြောပါတယ်။ နောက် တစ်ယောက်ကတော့ “နေဦး။ နေဦး။ နေဦး။ နေဦး။ ငါတွေ့ပြီ။ 'Film Threat Video Guide: the 20 Underground Films You Must See.' ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ တွေ့လိုက်တယ်" လို့ပြောပြန်တယ် အော် ကောင်းပြီလေ။ နောက်တစ်ယောက်က " ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပါ " လို့ပြောပါမယ်။ တစ်ယောက်က" ငါဒါကို IMDB ဝက်ဆိုက်မှာတွေ့ပြီ။ မဖျက်ပါနဲ့။ ထားလိုက်ပါ။ ထားလိုက်ပါ။ " လို့ပြောပြန်တယ် ဒီဆော့ဝဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ဒီဆန္ဒပြုချက်တွေက ဝက်ဆိုက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဒီအတိုင်း စာရိုက်ထည့်လိုက်တာပါ။ စကားဝိုင်းတစ်ခု အဖြစ်သာ ဆန္ဒမဲ ပေးနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်သွားတာက နောက်ဆုံးအချိန်လည်း ရောက်ရော နည်းစနစ်ပို်င်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တစ်ဦးက ဒီစာမျက်နှာကို မြန်မြန်လာကြည့်ပြီး “ကောင်းပြီ။ ဖျက်မှာ ၁၈ခု။ ထားမှာ ၂ခု။ ငါတို့ဖျက်ပစ်လိုက်မယ်” ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားကိစ္စတွေမှာတော့ ဖျက်တာ ၁၈ခု၊ ထားမှာ ၂ခု ဆိုပေမယ့်လည်း မဖျက်ဘဲထားလိုက် ရတွေရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ထားမယ်ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံး ၂ခုက " တစ်မိနစ်လောက်နေပါဦး။ တစ်မိနစ်လောက်နေပါဦး။ ဘယ်သူမှမတွေ့မိသေးပေမယ့် ဒါကိုစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ငါတွေ့လိုက်တယ်။ ဒါအကြောင်းဖော်ပြတဲ့စာမျက်နှာရဲ့ Link ကိုငါတွေ့ပြီ။ မနက်ဖြန်ကြရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး မဖျက်ပစ်လိုက်ပါနဲ့" ဆိုတော့လည်း ဒီစာမျက်နှာမြဲသွားပါတယ်။ မဲပေးတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာလည်း အရေးပါပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ ဒါက တကယ့်ကိုကျစ်လျစ်တဲ့ အသိုက်အဝန်းပါ ဒီအောက်နားမှာ Rick Kay က "ထားလိုက်ပါ။ တကယ့်ရုပ်ရှင်ပဲ။" ဆိုပြီးပြောပါတယ်
Rick Kay ဆိုတာက နာမည်ကြီး ၀ီကီပီးဒီးယားသမားပါ။ အလိမ်အညာတွေ၊ လက်သရမ်း ဖျက်ဆီးတာတွေ၊ ပယ်ဖျက်ရန် မဲပေးခြင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအများကြီး လုပ်ခဲ့သူပါ။ သူလုပ်တဲ့အလုပ် သူကျွမ်းကျင်တော့ ဒီအသိုက်အဝန်းအတွင်းမှာ သူအမြင်က တော်တော်လေး အရေးပါ အရာရောက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါတွေအားလုံးကို ဘယ်လို စီမံအုပ်ချုပ်သလဲ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေလို ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တကယ်သိချင်ကြပါတယ်။ ၀ီကီပီးဒီးယား အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ၊ ဒီအသိုက်အဝန်းကို အုပ်ချုပ်မှုဟာ ရှုပ်ထွေးစရာ ကောင်းပေမယ့် အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အများဆန္ဒအမြင်တွေ ယှဉ်တွဲထားမှုပါ။ ဆိုလိုတာ ကျွန်တော်တို့က ဆောင်းပါးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဲမပေးမိအောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူအများစုရဲ့အမြင်တိုင်းက မဖြစ်မနေ ဘက်လိုက်မှု ကင်းတာမျိုးမဟုတ်လို့ပါ ဒီမိုကရေစီ သဘောနည်းနည်းပေါ့။ နည်းစနစ်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ သူတို့တွေဟာ စာမျက်နှာတွေကို ဖျက်နိုင်တဲ့သူတွေပါ စာမျက်နှာတွေကို ဖျက်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိသူတွေလို့ မဆိုလိုပါဘူး သူတို့လည်း စည်းမျဉ်းတွေ အားလုံးကို လိုက်နာရပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတာပါ။ သူတို့က အသိုက်အဝန်းက ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေလူတွေ ကြံုရာ ကျပန်း အင်တာနက်လူရှုပ်တွေက စွယ်စုံကျမ်းပါ အကြောင်းအရာတွေမှာ ဘက်လိုက်လွှမ်းမိုးလို့ရအောင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ကျွန်တော့် စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်တိုင်ရွေးတယ်လို့ ကျွန်တော်ကို စွပ်စွဲချင်ကြပါတယ်။ ဒါမျိုးကို ကျွန်တော် အမြဲတမ်း ရယ်မိပါတယ်။ အမှန်က သူတို့တွေကို သယ်ပုံဘယ်နည်းေရွးတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ အထက်ကနေ အာဏာနဲ့ ထိန်းချုပ်တာမျိုး နည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။ Rick Kay ရဲ့ အမြင်က ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ အခြားလူတစ်ဦးထက် ပိုပြီးအရာရောက်တယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောတုန်းကတည်းက ခင်ဗျားတို့ ဒီအကြောင်းကို ရေးတေးတေးတော့ သိလိုက်မှာပါ။
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာကို ဟိုတလောက ဖောင်ဒေးရှင်းဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မဲမပေးသူအရေအတွက်ရဲ့ နှစ်ဆပိုတဲ့ ထောက်ခံမဲနဲ့ ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ Angela နဲ့အတူ တစ်ခါတစ်လေ ဟောပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က “ဥပမာအားဖြင့် Angela ဆိုရင် ၀ီကီပီးဒီးယား မှာ ဘာလုပ်လုပ် အပြစ်လွတ်တဲ့သူပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကတကယ့်ကို လေးစားခံရပြီး အာဏာရှိသူမို့ပါ”။ လို့ပြောတိုင်း Angela မှာ ရှက်သွားပါတယ်။ ဒီသရော်ချက်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Angela အပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတာက သူမက ခင်ဗျားသိသမျှထဲမှာ ၀ီကီပီးဒီးယားရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မှန်သမျှကို ဘယ်သောအခါမှ မချိုးဖောက်တဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်လို့ပါ။ သူမက ၀ီကီပီးဒီးယားရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမှန်သမျှကို တကယ်သိတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သူလို့လည်း ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီမှာ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်မျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါက ဒီအသိုက်အဝန်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါ။ အဲဒီအကြောင်းကို ဘာလင်မြို့မှာ ကျွန်တော်ပြောတော့ နောက်တစ်နေ့ သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ "မိမိသည် အင်္ဂလန်ဘုရင်မကြီးဖြစ်၏" ဆိုပြီး ရေးလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ အဲလိုမျိုးမဟုတ်ရပါဘူး ခင်ဗျ (ရယ်သံများ) ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီအသိုက်အဝန်း အတွင်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အကြောင်းပါ။ ဒီ အခမဲ့ ဆော့ဝဲ လောကမှာ ကြာရှည်နေတဲ့ ထုံးတမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “သဘောကောင်းသော အာဏာရှင်” ဆိုတဲ့ စံနမူနာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အခမဲ့ ဆော့ဝဲ စီမံကိန်းအများစုကို ကြည့်လိုက်ရင် “သဘောကောင်းသောအာဏာရှင်” လို့ အားလုံးက လက်ခံထားတဲ့ ဦးဆောင် ချုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးရှိပါတယ်။ အဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ “သဘောကောင်းသော အာဏာရှင်” ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကိုမကြိုက်ပါဘူး။ ဒီစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နယ်ပယ်ကြီးထဲက ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ် ဒါမှမဟုတ် အခန်းကဏ္ဍက တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြုစုပေါင်းစည်းပေးထားတဲ့ လူသားဗဟုသုတတွေ အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အာဏာရှင်ဖြစ်ဖို့လို့ မထင်ပါဘူး ဒါမျိုးက လုံးဝမသင့်လျော်ပါဘူး သို့တိုင် တစ်ခါတစ်လေ အာဏာရှင်သဘောတော့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ — တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာတွေရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ပုံသေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု လုပ်စဉ်တွေကြောင့် အများကြီး နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ ဘာလို့ ဒါကအရေးကြီးသလဲ ဆိုတာ ဥပမာ တစ်ခုအနေနဲ့ ဟိုတလောက နာဇီလက်သစ် ဝက်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုက ၀ီကီပီးဒီးယားကို တွေ့သွားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဆိုပါတယ် "အမယ်လေး။ စိတ်ပျက်စရာပဲ။ ဒါက ဂျူးပူးပေါင်းကြံစည်ရေး ဝက်ဆိုက်တစ်ခုပဲ။ ဒို့မကြိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိ ုပယ်ဖျက်ခိုင်းမယ်။ သူတို့မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့ စနစ်ရှိကြောင်း ဒို့တွေသိရတယ်။ ဒို့မှာ အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း လေးထောင်ရှိတယ်။ သူတို့တွေကိုပို့ပြီး အားလုံးကိုမဲပေးခိုင်းလိုက်ပြီး ဒီဝက်ဆိုက် စာမျက်နှာတွေကို ဖျက်ပစ်ရအောင်လုပ်မယ်။ " တဲ့ခင်ဗျ။ သူတို့ တကယ်တမ်း ၁၈ယောက်လောက်ပဲ ပေါ်လာနိုင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ နာဇီလက်သစ် ကိန်းကဏန်းတွေ သိရတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့မှာ ၁၈ ယောက်လောက်ပဲ ရှိချိန်မှာ လေးထောင်လောက် ရှိတယ် လို့ထင်နေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ၁၈ ယောက်ကို ဝက်ဆိုက် ပေါ်လာပြီး နည်းနည်း ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ လုံးဝပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖျက်ပေးဖို့ မဲပေးအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မဲက ၈၅ မဲ ၁၈ မဲ နဲ့ပြီးသွားပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေအပေါ်မှာ အန္တရာယ်တော့ အမှန်တကယ်မရှိခဲ့ပါဘူး ဆိုတာတော့ပြောစရာ မလိုဘူးပေါ့။ သို့သော် လူတွေကပြောကြပါတယ်။ " ဒါပေမဲ့ ဒို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဆိုလိုတာက ဒါမျိုးကဖြစ်လာနိုင်ပြီး အဖွဲ့တစ်ခုခုက တကယ်ကို လေးလေးနက်နက်စုဖွဲ့ပြီး မဲတွေလာပေးချင်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ" တဲ့။ ဒီတော့ "သွားစမ်းပါကွာ။ စည်းမျဉ်းတွေ ပြောင်းပစ်လိုက်ရုံပဲပေါ့" လို့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါက ဒီအသိုက်အဝန်းအတွင်းက ကျွန်တော်ရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ လွတ်လပ်မှုတို့က အချက်အလက်တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေတာမျိုး လုံးဝ ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာ ပြောဖို့ပါ။ လူတွေက ကျွန်တော့် အခန်းကဏ္ဍပေါ်မှာ ယုံကြည်နေသရွေ့ ကျွန်တော့် အတွက် ခိုင်မာတဲ့နေရာ တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ သေချာပေါက် အခမဲ့ ဆော့ဝဲ စနစ်ကြောင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်လုပ်တာ မကောင်းရင် စေတနာဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ဖန်တီးထားတာ ယူပြီးထွက်သွားဖို့ ဝန်မလေးဘူးဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကနေ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာလုပ်ပါလို့ပြောလို့မရပါဘူး
ဒီတော့ နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ ၀ီကီပီးဒီးယား ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝီကီစံသတ်မှတ်ချက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပါပဲ ကျွန်တော်တို့က အစွန်းရောက် အင်တာနက် မင်းမဲ့ ဝါဒီတွေ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့က လူမှုရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလွန်ကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အသိုက်အဝန်းရဲ့ စွဲမြဲတဲ့ စိတ်ဝင်စား အလေးပေးမှုကိုက ကျွန်တော့်တို့ လုပ်ဆောင်ချက်ရဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းဖို့သာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဘယ်နည်းလမ်းကို သုံးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်မဟုတ်ပါဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ/ (လက်ခုပ်သံများ)
Ben Saunders: ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ Ben Saunders ပါ။ Jimmy ခင်ဗျ၊ ဘက်မလိုက်မှုဟာ ၀ီကီပီးဒီးယား အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်လို့ ခင်ဗျား ပြောခဲ့တယ်နော် ကျွန်တော် တွေးမြင်မိတာက ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေကို ပညာသင်ကြားဖို့သုံးနေတဲ့ ပြဌာန်းစာအုပ်တွေဟာ မလွှဲမရှောင်သာအောင်ကို ဘက်လိုက်တဲ့သဘောရှိပါတယ် ၀ီကီပီးဒီးယားကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေသုံးတာ ကြံုဖူးပါသလား ၀ီကီပီးဒီးယား ကနေ ပညာရေးကဏ္ဍကို ပြောင်းလဲစေနိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို မြင်ပါသလဲ
Jimmy Wales: ဟုတ်ကဲ့။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အများအပြား ၀ီကီပီးဒီးယားကို စသုံးနေပါပြီ ၀ီကီပီးဒီးယား နဲ့ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာက ပြောနေတဲ့ ဇာတ်ကြောင်းတွေ ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တော့ အမှားတွေလို့ ထင်တယ် ဘလော့ဂါတွေနဲ့ သတင်းစာတွေ နှိုင်းယှဉ်မှု ဇာတ်ကြောင့် ပေါက်လာတာပါ ဇာတ်ကြောင်းကတော့ “ဒီမှာလေ ၀ီကီပီးဒီးယားဆိုတဲ့ ဆန်းဆန်းပြားပြား အရာတစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါကို ပညာရှင်တွေကမုန်းတယ်။ ဆရာဆရာမတွေ မုန်းတယ်။” တဲ့။ နောက်တော့ ဒီအချက်က မမှန်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ "အဘယ်ကြောင့် ပညာရှင်များ ၀ီကီပီးဒီးယားကို မုန်းသလဲ?" လို့ဆိုလာတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ယောက်ဆီက အီးမေးလ်တစ်စောင်ရခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်က ကျွန်တော်ရဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် အီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ ပို့လိုက်ပါတယ် သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ အဲဒီမှာ အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးခြင်းခံထားရလို့ပါ "တကယ်က သူတို့အကုန်လုံး မုန်းတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး" လို့ကျွန်တော် ပြောလိုက်ပါတယ် (ရယ်သံများ) ဒါပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် တကယ်တမ်း ကျွန်တော်တို့မှာ စီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စိတ်လှုပ်ရှားမိတဲ့အရာပါ ဝီကီ စာအုပ်များ ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းပါ ဘာသာစကားအားလုံးနဲ့ ဖတ်စာအုပ်တွေ ဖန်တီးဖို့ အားထုတ်မှု တစ်ရပ်ပါ ဒါက တော်တော်လေး ပိုကြီးမားတဲ့ စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး အသီးအပွင့်ဖြစ်လာဖို့ နောင် နှစ် ၂၀ လောက် ကြာနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီစီမံကိန်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက ကမ္ဘာပေါ်က လူတစ်ဦးချင်းစီကို စွယ်စုံကျမ်း တစ်ခုပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ပါ သူတို့တွေကို AOL စီဒီချပ်ပြားတွေနဲ့ အသုံးမဝင်တာတွေ စာတိုက်ကနေ ပို့ပေးမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး သူတို့ အသုံးချနိုင်မယ့် ကိရိယာတစ်ခုကိုပေးမှာပါ ကမ္ဘာပေါ်က လူတော်တော်များများအတွက် တက္ကသိုလ်အဆင့် ရေးသားထားတဲ့ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုကို ပေးလိုက်လည်း ကိုယ်တကယ ်အသုံးချနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေအထိ မြှင့်တင်တည်ဆောက်ပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေ မရှိထားဘူးဆိုရင် ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး ဒါကြောင့် ဝီကီစာအုပ်စီမံကိန်းက ဒါကိုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အားထုတ်မှုတစ်ရပ်ပါ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာ သိပ်ကိုကြီးမားတဲ့ — ကျွန်တော်တို့ဆီက လာတာတောင် ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ အမျိုးမျိုးသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေ ဖြစ်နေတာကိုးခင်ဗျ ဒါပေမဲ့ အခမဲ့ လိုင်စင် စနစ်သုံးတဲ့ ပြဌာန်းစာအုပ်တွေဟာ ပညာရေးကဏ္ဍမှာ နောက်ပေါ်လာမယ့် ကြီးကျယ်တဲ့ အရာပါပဲ။